Cinnamon edition yeDebian inomhanya kunze kweiyo main maintainer | Linux Vakapindwa muropa
Kune akawanda madhesiki eLinux-based operating system, asi vashandisi vazhinji vanosarudza mashoma. Vazhinji vedu takapedza makore tichishandisa GNOME paUbuntu, asi kudengenyeka kwenyika kwekuenda kuUnited kwakaita vazhinji vedu kutsvaga dzimwe nzira. Pakati pavo, vamwe vedu tanga tichishandisa Linux Mint kwechinguva nekuti desktop yavo yaive yakanaka, uye icho chinhu chiri icho chikuru chinochengeta Cinnamon chinyorwa cheDebian, asi nguva yasvika yekutora kumwe kusvetuka uye kutaura zvakanaka.
Debian inowanikwawo ne "Cinnamon" desktop. Uyo waimutsigira aive Norbert Preining, asi, saiyewo yakashuma, haichazoshandi uye haizoshande paCinnamon edition yeDebian yekuburitswa mune ramangwana, seCinnamon 5.0 iyo Yakaburitswa pakutanga kwaJune. Chikonzero cheizvi zvese? Iwe hausisiri kushandisa desktop yakagadzirwa neLinux Mint nekuti zvinoita sekunge iwe kuti iyo KDE iri nani kwazvo, ficha yakagovaniswa nemunyori wenyaya ino.
Iyo Cinnamon edition yeDebian ichaenderera mberi… kana mumwe munhu akanhonga gauntlet
Semushandisi, zvakaitika kuPreining ndizvo zvimwe chete zvakaitika kune vazhinji vedu: iyo KDE / Plasma shanduro 3 ne4 dzakapa matambudziko mazhinji, saka haana kuzvishandisa kwenguva yakareba. Uye GNOME? Zvakanaka, vazhinji vanoishandisa, asi mashandisiro ayo haana kupfuma seaya eKDE uye anoita kunge akagadzirirwa "vashandisi vemasimba" ".
Kubva switch yangu kuKDE / Plasma, ini handina kushandisa Cinnamon mumwedzi. Ini ndaingopota ndichiyedza shanduro nyowani, asi handina kumbovapa bvunzo chaidzo-yepasirese. Sezvo ndasiya Gnome3 nekuda kwekushomeka kwayo kwekushandisa kwevashandisi vehunyanzvi, ini ndakatizira kuCinnamon ndikawana imba yakanaka imomo kwenguva yakati rebei - ndichishandisa tekinoroji yazvino asi ndichichengeta iyo UI ichichinja. Ini handina kana kumbofunga kushandisa KDE kwenguva yakareba, ndazvipisa ini mukati memazuva akaipa eKDE3 / 4 apo bloat ndiyo yakanyanya kutsanangurwa.
Kana iri ramangwana reCinnamon edition yeDebian, icharamba ichivapo chero bedzi mumwe munhu achinhonga girovhosi uye achienderera mberi nekusimudzira. Preining inova nechokwadi icho haizochengete yechishanu vhezheni yeCinnamon paDebian, kunyangwe icharamba ichichengetedza iyo Cinnamon 4.0 mapakeji. Kana pasina nhanho inoenda kumberi, sinamoni inogona kunge isisipo muDebian sedhisiki. Idzo nhau dzakaipa kune vashandisi vako, asi vashandisi veKDE vanonzwisisa musimudziri.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Mukuru wekuchengetedza weCinnamon edition yeDebian inoenda ku KDE
Ini ndaive fan of Unity uye ndakachinjira kuGNOME ndisingadi. Asi, chokwadi ndechekuti ndakaguma ndarega KDE. Zvese zviri mu KDE Neon uye muUbuntu Studio ruzivo rwevashandisi ruri nani.
Makore apfuura ini ndaive gnome 2 mushandisi, ndine Ubuntu uye zvainakidza, ipapo ndakaenda kuUniity uye zvaivewo zvandaifarira, uye gnome 3 imwe nyaya. Parizvino ndiri mudambudziko, ndingafarire kushandisa shanduro dzichangoburwa dzeKde Plasma, asi panogara paine kutya kuti chimwe chinhu chingatyoka. Kune rimwe divi Debian neyakare vhezheni yePlasma, hehehehe. Chinhu ndechekuti, Kde Plasma iri pane imwe nhanho.
Ruvara uye Dzidza Linux neRed Hat Mabhuku